Teepee leh sharooto - Moi Mili
Teendhooyin qurux badan oo carruurta loogu talagalay.
Teendhooyinka Moi Mili waxay fikrad fiican u yihiin qurxinta geeska carruurteenna ama hadiyad marmar ah. Wareegtadayada leh qaab caadi ah ayaa laga tolay maro qaro weyn ama maro wanaagsan. Gabi ahaan waxaa lagu gooyaa suuf. Moodooyinka ku jira qaybtaan waxaa lagu dhammeeyaa silsilado kala duwan, cajalado ama sharoobo. Meesha laga soo galo tipi iyo daaqadda ayaa lagu xardhay iyaga. Qurxintani waxay teendhooyinka ka dhigaysaa mid gaar ah.
Teepee wuxuu ku leeyahay daaqad dhanka bidix. Ushayada timirtayada waa la jejebiyey, waa la hagaajiyey, dhismaha oo dhan waxaa lagu xardhay xadhig adag. Uluhu alwaaxdu waxay ku qarsoon yihiin tunelada hoose ee hoostiisa. Teendhooyinka Nice waxay leeyihiin derbiyada 5 iyo saldhig fadhiga, taasoo ka dhigaysa inay ka xasilloon yihiin oo ka ballaaran yihiin teendhooyinka leh saldhig laba jibbaaran.
Waxaan soo saarnaa Poland, inta badan wax soo saarka asalka Polish. Waxaan daryeelaynaa faahfaahin kasta iyo tayo sare oo ah xirfad-shaqeedka iyo wax soo-saarka. Tipi wuxuu la imanayaa buug-gacmeed iyo dabool. Waxaan kugu casuunaynaa inaad ka abuurto noocyo midab leh alaabadayada.
Teendhooyinka carruurta loogu talagalay "Mint fog"
Teendhooyinka teendhooyinka "Barafka cad"